सावधान ! फेसबुक र भाइबरमा चिठ्ठा परेको लोभमा तपाईपनि थाहै नपाई ठगिनु होला !! • Janaboli
सावधान ! फेसबुक र भाइबरमा चिठ्ठा परेको लोभमा तपाईपनि थाहै नपाई ठगिनु होला !!
काठमाडौं । प्रविधिको विकासले सहज त भएको छ । तर त्यही प्रविधिलाई चिन्न नसक्दा ठुला–ठुला अपराधको शिकार बन्नु परेको छ । यसबाट धेरै ठगिएकापनि छन् । एक साताअघि झापाकी एक महिलाको फेसबुकमा लन्डनबाट म्यासेज आयो, ‘तपाईंको प्रोफाइल हेरेर म धेरै प्रभावित भएँ । मायाको चिनोस्वरुप केही सामान र त्यसभित्र नगद पनि पठाउँदैछु । लिन्न नभन्नु होला ।’ लुइस स्टेफन नाम गरेको आईडीबाट त्यो म्यासेज आएको थियो । ती व्यक्तिले कुरियर पठाउने ठेगाना मागे । त्यसको एक दिनपछि फेरि म्यासेज आयो, ‘मैले कुरियर गरेको छु, त्यहाँ दुई दिनभित्रमा आइपुग्छ ।’
त्यसको भोलिपल्ट कुरियर गरेको सामान र रसिदको तस्बिरसमेत आयो । ‘त्यति देखेपछि नपत्याउने कुरै भएन,’ ती महिलाले भनिन्, ‘तर, तीन दिन बितिसक्दा पनि सामान नेपाल आइपुगेन ।’ अर्को दिन बिहानै भारतीय नम्बरबाट फोन आयो । फोनमा बोल्ने पुरुषले हिन्दी भाषामा भने, ‘तपाईंको सामान नयाँदिल्लीमा आइपुगेको छ । यहाँबाट नेपाल पठाउँदा ५० हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यो रकम पठाइदिनु भएपछि तपाईंले सामान प्राप्त गर्नु हुन्छ ।’ दिल्लीबाट फोन आउनेबित्तिकै ती महिलालाई पहिल्यै शंका लागिसकेको थियो । नभन्दै पैसा माग भएपछि ती महिला हच्किइन् । दुई दिनसम्म कुनै प्रतिक्रिया जनाइनन् । ‘मैले सामान पठाइदिएको थिएँ । तपाईंले अहिलेसम्म लिनु भएको रहेनछ,’ फेरि ती विदेशी नागरिकले म्यासेज गरे ।
जवाफमा ती महिलाले आफूसँग ५० हजार नभएको र त्यो रकम आईएमईमार्फत् पठाइदिएपछि मात्र आफूले सामान लिन सक्ने जानकारी गराइन् । त्यसपछि कुनै रिप्लाई आएन । काठमाडौंको बानेश्वरमा बस्दै आएका एक विद्यार्थीलाई भाइबरमा २५ लाख रुपैयाँ परेको सन्देश आयो । लेखिएको थियो, ‘हेल्लो कस्टमर केयर से बात कर रहाँ हुँ, आपके नम्बर पर लटरी लगा हे, २५ लाख के ।’ उनी आश्चर्यमा परे, भाइबरमा कुनै व्यक्तिको नम्बरबाट २५ लाख रुपैयाँको चिठ्ठा परेको म्यासेज आएपछि । तर, उनले सामाजिक सञ्जालमा यसरी विभिन्न व्यक्तिले ठगी गर्ने गरेको खबर पढेका थिए । त्यसैले उनले त्यो म्यासेजको कुनै जवाफ फर्काएनन् ।
ललितपुरकी सुवु महर्जनलाईपनि त्यही किसिमको म्यासेज आएको थियो । उनलाई बारम्बार भारतको कर कार्यालयको कर्मचारी हुँ यहाँ कर नबुझाएसम्म सामान फिर्ता आउँदैन भन्दै फोन आएको थियो । उनले इन्डियाको फोनमा कल ब्याक गरेरै हज्जारौ रुपैया सकाईन् । पछि उनले भने अनुसारको रकमपनि पठाईन् तर सामान कहिलै आएन ।